(Waxaa laga soo toosiyay Abu Bakr Sadiiq)
Abu Bakr waxaa loo yaqaaney Al-Siddiq (run sheege) sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee rumeeya Nebiga iyo qofkii labaad ee ugu hor rumeeyay diinta Islaamka, waxa ka horeeyay xaaskii Nebiga waa Khadiijo.
Marka laga yimaado saaxiibnimada nebiga, Abu Bakr wuxuu ahaa sodoga Nebi Muxamed. Sanadkii 623 C.D ayaa Abu Bakr al-Sadiiq gabadhiisa Caisha u aroosiyay nebiga (wakhtigaasi oo Caisha ay jirtey 9 sano); midani waxay sii adkeeysay xidhiidhka iyo isku-xidhnaanta labadooda.
Intii nebigu noolaa, Abu Bakr sadiiq wuxuu ahaa saaxiibka iyo la-taliyaha kowaad ee Nebi Muxamed asagoo kala qeyb galay arimo aad u badan. Goortii nebigu u hijroonayay magaalada Madina Abu Bakr wuxuu ahaa qofka kali ah ee rasuulka la galay safarkaasi. Wuxuuna ka garab dagaalamay Nebi Muxamed qaswado aad u badan ooy ka mid yihiin Dagaalkii Beder, Dagaalkii Uxud, Dagaalkii Dhufeysyada, qabsashadii magaalada Makka, Dagaalkii Kheybar, Dagaalkii Xunayn, go'doomintii Daa'if iyo Dagaalkii Tabuk. Dagaaladani wuxuu Abu Bakr ku kharash gareeyay in badan oo dhaqaalihiisa ka mid ah.
= Abtirsiinta = Cabdullahi binu abii Qaxaafa Cusmaan bin Caamir bin Cumar bin Kacab bin Siciid bin Tayam bin Mara bin Kacab bin Luwi bin Qaalib bin Fahar bin Maalik bin Nadar bin Khasiima bin Mudrika bin Ilyaas bin Mudar bin Nasaar bin Mucad bin Cadnaan.
=Taariikhdii Horemuxuu uqabtay islaamka
1 Hijradii Madiina
2 Dagaaladii uu Galay
3 Qoyska Abu Bakr
Dagaaladii uu GalayEdit
= Hogaamiye Abu
7qabsashadii makka iyo iwm
Qoyska Abu BakrEdit
Qoyska Abu Baker waa aabehiis Cusman Abu Quhafa, hooyodiis Salma Umm-ul-Khair, walaalohiis rag iyo dumarba, xaasaskiisa iyo caruurtiisa.
Cusman Abu Quhafa
Qutaylah bint Abd-al-Uzza (wuu furay)
Habibah bint Kharijah
↑ , from islam4theworld
↑ , from Encyclopædia Britannica
↑ Abu Bakr Al-Siddiq - This-is-Islam.co.uk  Archived Nofeembar 13, 2013 // Wayback Machine
↑ "qabsashadii magaalada Makka, Dagaalkii Kheybar, Dagaalkii Xunayn, go'doomintii Daa'if iyo Dagaalkii Tabuk"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Bakr&oldid=214421"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 22:25
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 22:25.